> Resource > DVD > Sida loo gubi DVD Files / DVD Folder u Free la ImgBurn?
ImgBurn waa CD weli awood badan miisaanka yar oo DVD gubanaya xidhmo software. Waxaad isticmaali kartaa ImgBurn in la dhiso DVD Video cajalladaha (ka folder VIDEO_TS a), HD DVD Video cajalladaha (ka folder HVDVD_TS a), saxanno Video Blu-ray (ka BDAV a / BDMV folder) iyo Audio CD disc fudayd.
ImgBurn ka shaqeeya 5 hababka iyo bixisaa ah dawdarka hab fudud in wax si fudud lagu sameeyey. Si aad u gubi files DVD ama DVD folder , waxaad u baahan tahay xulo hab dhista. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud si ay u gubaan files DVD ama DVD folder.
Guide Easy in ay Guba DVD files / DVD folder la ImgBurn
Talaabada 1: Tag dhis (Device) hab
Laga soo bilaabo screen ImgBurn kor ku qoran, dooro " in disc qor files / fayl "ilaa keeno goobaha ay wada hadal sida hoos.
Next, riix " Browse u file a "ama" Browse u gal ah "badhanka si ay u dajiyaan files DVD ama DVD fayl, kaas oo ka dhex muuqan doonaa liiska. Isticmaal saar waxyaabaha soo xulay ama ka saar waxyaabaha dhan button in ay tirtirto files aan la rabin.
Fiiro gaar ah: xitaa aad riix kartaa "Switch inay aqbasho sare" button in la furo editor qaabka disc sida Nero in lagu daro oo ka saari DVD files / fayl. Click "xisaabiyaan" button By, waxaad ka heli doontaa macluumaad ku disc dhanka midig.
Talaabada 2: samaysaa saldhigyo
Sida aad ayaa laga yaabaa in laga helo in ay jiraan goobo badan oo aad ka heli karto, oo ay ku jiraan xawaaraha qoraal, nuqulo DVD, DVD calaamadda, fursadaha Image sidaas. Guud ahaan, goobaha default waa ganaax dadka intooda badan. Sidaas, waxaad si dhab ah u gudub talaabo this.
Talaabada 3: Gubashada DVD Files / fayl
Haddaba haddii aad leedahay DVD drive ah sida caadiga ah ka shaqeeya, waxaad arki doontaa button dhista uu diyaar u yahay in la riixi. Just u sameeyo, oo waxaad ka heli doontaa DVD files / folder aad disc maran gubay. No DVD drive? Demi in ISO saarka image marayo wax soo saarka menu sare file Image iyo gubi DVD files / fayl in ISO file, kuwaas oo loo qori karo computer la DVD drive ah.
Guba Talooyin DVD Files / DVD fayl
1.For sababo waafaqsan, xataa haddii aad qabto folder VIDEO_TS ah, waxa lagugula talinayaa in la abuuro folder AUDIO_TS ah oo dhaaf iyada oo bannaan, markaas gubi fayl in DVD.
2.You sidoo kale guban karta files DVD ama DVD folder si file ISO image u gurmad ama DVD-saddexaad software gubanaya sida Nero ama Roxio gubanaya.
3.Hadii aad qorshaynayso in ay gubaan CD Audio ka nooca file taageeray via DirectShow / ACM kasta, la abuuro file CUE hore iyo file CUE gubi in DVD in hab qor.
Guba DVD fayl ee Mac
Sababtoo ah ImgBurn ma laha version Mac, si ay u gubaan DVD fayl ee Mac, waxaad isku deyi kartaa DVD Creator for Mac (version Windows sidoo kale la heli karo) ka Wondershare. Way fududahay ah in la isticmaalo qalab gubashadii DVD filimka si ay u sameeyaan DVDs kuu gaar ah la videos, sawiro iyo music, oo markaas iyaga ciyaaro ciyaaryahanka DVD ama la wadaagto dadka kale.
Settings gacan-jabis Best u Hawlaha Universal
Waa maxay 3D Blu-ray? Halkee Blu-Ray 3D Movies?
Raadka guurka kala duwan ee Flash Muqaal & DVD Muqaal